राउटेले अगुवा भन्छन्ः पेटभन्दा ठूलो केही छैन मुख्यमन्त्रीज्यू ! — Breaking News, Headlines & Multimedia
राउटेले अगुवा भन्छन्ः पेटभन्दा ठूलो केही छैन मुख्यमन्त्रीज्यू !
कोरपाटी संवाददाताफागुन १९, २०७७सुर्खेत
१९ फागुन २०७७, बुधबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई राउटे अगुवा दिलबहादुर शाहीले भेटेर गुनासो पोख्नुभएको छ ।
आफ्नो जनताका लागि खानाको समस्या भएको भन्दै सोमबार मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकक्षमा पुगेका दिलबहादुरले गुराँस गाउँपालिकाले चार महिनासम्म भत्ता नदिएको गुनासो पोख्नुभयो । गाउँपालिकाले दिने मासिक प्रतिव्यक्ति रु.तीन हजार नपाउँदा खाने चामल किन्न नसकिएको र जसको कारण भोको पेटमा सरकारसमक्ष बिन्ती राख्न आएको उहाँले जनाउनुभयो ।
“के गर्ने, मेरो जनता भोकले मर्न आँटे । म पनि भोकै यहाँका आएको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “पेट भन्दा ठूलो केही छैन । सरकारले भत्ता र रासनपानी दिएर हामीलाई पठाउनु पर्यो ।” उहाँले ४६ घर परिवारका सबैलाई खानका लागि चामल नहुँदा भोकले ठूलो समस्या भएको र प्रदेश सरकारलाई जतिसक्दो छिटो भोको पेटको समस्या समाधान गरिदिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
आफ्नै कार्यकक्षमा भोकको समस्या बोकेर आएका राउटे अगुवा दिलबहादुरको टोलीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले चिन्ता नलिन सुझाउनुभयो । उहाँले राउटेको ४६ घर परिवारका लागि प्रदेश सरकारले खानसहित अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्थित पाल उपलब्ध गराउने वचन दिनुभयो ।
राउटेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई काठको कोशी र ठेकी उपहार दिएका थिए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठलाई पनि उनीहरुले कोशी उपहार दिएका थिए । उनीहरुलाई प्रदेश सरकारले केही रासनपानी दिएपछि खुशी भएर राउटेहरु फर्केका छन् ।
संघीय सरकारले प्रति राउटे मासिक रु.तीन हजार दिँदै आएकोमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आव.देखि उनीहरुलाई मासिक रु.दुई हजार भत्ता थपेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले राउटेलाई स्थायी घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव राख्दा अगुवा दिलबहादुर आफ्नो फिरन्ते पहिचान मेटिने तर्क गर्नुभयो । पछिल्लो समयमा उनीहरुलाई अस्थायी भएपनि पालको व्यवस्थित बास गर्ने योजना बनाईएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।